Waa Maxay Sababta Magaaladda Muqdisho Qaraxyadda Ugu Dhacaan? – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Faah-faahin:-Al-shabaab oo Xalay Dilay Diini Barre Uboow
Madaxweynaha Hir-shabeelle oo la kulmay taliyaha Ciidamadda Xoogga+Sawirro
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo Tababar Usoo Xirey Ciidamo+Sawirro
Africom oo Socdaal Dhanka Iskaashiga Amniga ah ah ku Marayso Wadamo ku Yaala Afrika
Afhayeen u hadlay Ciidamada midowga Africa AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa sheegay in ciidamadooda ay wax eed ah ku lahayn qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ee dagaalyahanada Xarakada Al-Shabab ay geystaan
Waxa uu sheegay in ciidamadooda ay Soomaaliya ka qabteen shaqo badan oo ay Al-shabAab ka saareen dhawr magaalo hase ahaatee sugida amaanka magaalada Muqdisho ay u xil saaran yihiin ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in sugida amniga magaaladda muqdisho lakala qeyb saday islamarkaana AMISOM loo xil saaray sugida amaanka madaxtooyadda Soomaliya iyo garoonka diyaaradaha inta kalana waa loo xil saaray Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaliya.
“Ugu yaraan shantii bilood aynu soo dhaafnay waxaa laga dhigay Magaaladda Muqdisho mid amaan ah waxaa loo sameeyay ciidamo loogu magac daray xasilinta Caasimadda, 500 oo Police ah, 500 Nabad Sugid, iyo 500 Malatari ayaa loo sameeyay magaaladaan,waxay ka hor tageen weeraro lasoo qorsheeyay, waxay badbaadiyeen nolol badan”, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya Eng C/raxmaan Yariisow.
Eng Yariisow waxaa uu sheegay in dagaalyahanada Xarakada Al-Shabab sababta ay magaalada qaraxyada uga geysanayaan ay tahay inay dunida tusaan inay yihiin wili awood jirta.
Sidoo kale Tv-ga Al-Jaziira ayaa baahiyay in sanadkaan Magaaladda Muqdisho ay ka dhaceen qiyaastii 20 qarax kuwaasi oo sababay dhimashada 500 oo ruux iyo dhaawaca 600 oo kale qaraxyadaas badankoodna dagaalyahanada Xarakada Al-Shabab ayaa sheegtay.